Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0512 lar
Fahafoizan-tena lalina (1Tes2:7,8)
Alarobia 01 Aog.
Ny antony nanosika an’i Paoly voalohany indrindra hanao ny asany ao amin’ny 1 Tes. 2:4, dia ny mba hahazoany sitraka amin’Andriamanitra. Inona ihany koa no antony hafa voalazany ao amin’ireto andininy manaraka ireto? Jereo ny 1 Tes. 2:6-8.
Amin’izao fotoana izao, dia ny vola sy ny firaisana ara-nofo ary ny fahefana no heverina ho antony voalohany indrindra mamaritra ny fitondrantenan’ny olona, farafahakeliny ho an’ireo izay matimatin’ny fitadiavan-tombontsoa. Ao amin’ny 1 Tes. 2:3-6 i Paoly, dia mampiasa teny samihafa maromaro mba hanafoanana ny antony toy izany eo amin’ny sehatry ny asa fanompoana. Tsy misy toerana ho an’ny fieremana, ny fahalotoana, ny fitaka ary ny fandroboana eo amin’ny fiainan’ny Kristianina sy ny asany. Ny faniriana hahafaly an’Andriamanitra eo amin’izay rehetra ataony no antony voalohany indrindra nanosika ny apôstôly.
Ao amin’ny and. 6 i Paoly, dia milaza fa azon’ny apôstôly natao ny ho tonga entamavesatra ho an’ny Tesalônianina, na ara-bakiteny, dia hoe “hahavaky tratra” azy ireo. Amin’ny maha-apôstôly sy mpampianatra azy ireo mantsy, dia azony natao tsara ny nanampatra ny fahefany. Azony natao tsara ny niandrandra vola sy nitaky voninahitra manokana. Tao Tesalônika anefa, dia nolavin’i Paoly avokoa izay rehetra mety hanimba ny antony manosika azy hiasa, na izay mety hametraka sakantsakana eo amin’ny lalan’ireo vao niova fo.
Na dia ny hahazo ny fankasitrahan’Andriamanitra aza no antony voalohany nanosika an’i Paoly, dia milaza antony hafa kosa izy ao amin’ny andininy 7 sy 8. Tsy inona izany fa ny fitiavany fatratra ny Tesalônianina. Hita ao amin’ny andininy 8 ny fampiasana ny fomba fiteny maneho fihetseham-po mafana. Mihoatra lavitra noho ny adidy ny fitoriana ny filazantsara, ho an’i Paoly, satria natolony ho an’ny Tesalônianina ny fony sy ny tenany manontolo.
Inona no fihetsik’ireo fiangonana tany Makedônia, ao anatin’izany koa i Tesalônika, nanoloana ny fahalemem-panahin’ny apôstôly? Jereo ny 2 Kôr. 8:1-5. Mampianatra inona amintsika mikasika ny maha-zava-dehibe ny toetra eo amin’ny fiainan’ireo izay mijoro ho vavolombelona amin’ny hafa izany?
Noresahintsika tao amin’ny lesona Alatsinainy ireo tsiambaratelo telo fahiny mba handresen-dahatra olona: ny toetr’ilay mpandaha-teny (ethos), ny lôjikan’ny hevitra alahatra (logos), ary ny fanairana ny fihetseham-po sy ny fahalianana manokana (pathos). Antitranterin’i Paoly ao amin’ny andininy 4-6 fa ny toetry ny apôstôly no antony nanarahana azy ireo. Hitantsika ao amin’ny andininy 7 sy 8 ilay fanairana ny pathos, fatorana ara-pihetseham-po nisy teo amin’ny apôstôly sy ny Tesalônianina. Tonga amin’ny hery ambony indrindra ananany ny filazantsara rehefa mahakasika ny fo.
Saintsaino ny toetry ny olona izay nitaona anao ho amin’ny tsara teo amin’ny arapanahy. Inona no tena nanohina ny fonao manokana? Ahoana no hanahafanao ihany koa izany lafin-toetra izany?